UJeliel Guardian Angel: Uphawu lokuchuma kunye nokunyaniseka komtshato - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
UJeliel Guardian Angel: Uphawu lokuchuma kunye nokunyaniseka komtshato
UJeliyeli ubonisa ukunyaniseka eluthandweni. Uyingelosi yakho yomgcini, ukuba wazalwa phakathi kwe-26 kaMatshi kunye ne-30. Nazi iimpawu zakhe kunye nendlela yokumbiza.
Ukuba wazalwa phakathi kwe-26 kaMatshi kunye ne-30th, ingelosi yakho engumgcini ngu-Jeliel, oku kuthetha 'umncedi kaThixo', enceda ukwahlula phakathi kokukhohlisa kunye nokunyaniseka. Ngaphantsi komqondiso we-Aries, le ngelosi yendoda ikhuthaza ukuzala kunye nokunyaniseka komtshato. NgeNeptune kunye noSaturn njengamandla akhe, umele into yomlilo. Abemi bomthonyama baseYeliyeli bayachwayita yaye bayakuxabisa ulonwabo lwenyama. bethembekile eluthandweni, bathembekile phantsi komthetho. Fumana iimpawu anokuthi akusikelele ngazo lo mfanekiso wezulu.
UJeliel, ingelosi engumgcini we-Aries (ukusuka kwi-26 ngo-Matshi ukuya kwi-30 ngoMatshi)
UJeliyeli kunye neqela lakhe
Kutheni udibana naye?
Umncedi uJeliyeli unika ubulumko nothando. Uhamba nawe ebomini bakho njengesibini nakubudlelwane benu obahlukeneyo. Ngombulelo kububele bakhe, ikuvumela ukuba uphile ngokuzolileyo ngakumbi, nokuba kukho imiqobo. Ulungisa iingxaki phakathi kwezibini kunye nokungavisisani kwazo. Nguye uphawu lomanyano olulodwa phakathi kwezini zombini. Ewe, kubomi obulungeleleneyo, uyakukhuthaza ukuba uhlakulele ukuthanda abanye abantu kwaye ubathande.
Fumana zonke iimpawu zomkhuseli wengelosi uJeliel
Izinto ezilungileyo kunye namandla:
Uphuhliso, ubukrelekrele, ukuchuma, umsebenzi
IiSerafi, ezinjongo yazo ikukucoca
Keter ethetha isithsaba
Buluphu oBubhulu kunye noBuhlaza obuPashi
IAmethyst, iAquamarine, iFluorite, iJade, iLabradorite, iOpal, iTurquoise, iZircon
* I-sefirots ngamagunya alishumi okudala eKabbale. Bazibonakalisa ngendlela yomthi weKabbalah, apho iSefirot nganye iphuma amandla kaThixo uMdali.
U-Jeliel yingelosi engumgcini we-Aries abantu abazalwa phakathi kwe-26-30 kaMatshi: Banjani aba bantu?
Abo bazelwe phantsi kwempembelelo yakhe bachwayitile yaye bezifica ngeziyolo zenyama. Ngokunyaniseka kukubaluleka kwabo ngokokuziphatha nangokomoya, abo bazalwa phantsi kokhuseleko lukaJeliyeli baya kuhlala bethembekile emthethweni. Inkosi yokuchuma, ixhasa abalimi (abo bachumisa umhlaba) kunye nezibini. Ekugqibeleni, UYeliyeli unxulunyaniswa nesono esibulalayo sokubawa.
Izizathu zokuba kutheni kufuneka uqhagamshelane noJeliel
Ngokuqhagamshelana nale ngelosi, unokuba nethemba lokuzuza amandla avuselelayo, oko kukuthi, ukuthanda ngakumbi ubomi, iingcinga eziluncedo kunye nezakhayo kunye neengcinga ukoyisa ubunzima, kunye nokuzola ngakumbi kubudlelwane bakho bothando. Ewe, uyacetyiswa ukuba uqhagamshelane noJeliel ukuze ukubuyisela uxolo kubudlelwane bothando okanye bobudlelwane, kunye nokomeleza ubudlelwane. Ukwanoxanduva lokuthembeka eluthandweni.
U-Jeliel uyaziwa ngokuba yingelosi elumke kakhulu, othando lwakhe kunye nokukhanya kuya kukuvumela ukuba ufumane izisombululo kwiingxaki zobomi kunye nokuphazamiseka kwengqondo.
Ingelosi engumgcini uJeliel ibonelela:
Ukukwazi ukusombulula iingxabano ezithile
Ukukwazi ukwahlula phakathi kokwenyani kunye nefantasy
Indlela yokubiza uJeliel
Iintsuku zikaJeliel kunye neeyure ze-regency ziyi-10th kaJanuwari, i-22nd Matshi, i-4 kaJuni, i-18th ka-Agasti kunye ne-30 ngo-Oktobha phakathi kwe-00: 20 kunye ne-00: 40.
Ukunxibelelana nengelosi yakho yomgcini, yithi lo mthandazo kunye nesiqhumiso se-Oedipus:
Ngenxa yendalo iphela ndibiza uYeliyeli wothando;
Ngamana igama lakho lihlala libuyela kum Angel Jeliel ndiyakubongoza ukuba udale uthando olunyanisekileyo noluthembekileyo kubomi bam bemihla ngemihla.
Angel Jeliel, yanga indalo iphela ingandinika amandla okufumana uthando olunyulu, olunyanisekileyo, oluthembekileyo kunye nolwenyama.
Ngengelosi engumgcini uJeliel, ndibiza indalo iphela ukuba indivumele ukuba ndibe nothando lokwenyani ukuze ndibe nobomi obanelisayo.
Ingelosi yakho engumlondolozi inokuzama ukunxibelelana naweAmanani eNgelosi, musa ukulinda ukufumanisa. Funda yonke into malunga nefuthe le izithunywa zezulu .
Ukuhambelana kweScorpio: Loluphi uphawu lweZodiac onokuthi ube nalo?
ITaurus, iVirgo kunye neCapricorn njengeMiqondiso yoMhlaba, Fumanisa impembelelo enayo le nto kuwe.